शोकाकुल सगरमाथा :: Press Chautari ::
समय सन्दर्भ: शोकाकुल सगरमाथा
-प्रशान एलुङ राई
सगरमाथा उर्फ संसारको सबैभन्दा अग्लो धुरी । त्यहि सगरमाथा जसको शीर टेकेर सबैभन्दा अग्लाईको आनन्द लिन्छ मान्छे । त्यहि मान्छे जो, हाम्रो सगरमाथा उक्लेर आफुलाई अग्लो ठान्छ । अग्लाईको अलौकिक आनन्दमा संसार जीतेको अनुभूत गर्छ मान्छे । सगरमाथा छ र त हाम्रो देश पनि अग्लिएको छ । फैलिएको छ हजारौं माइलसम्म हाम्रो देश । समग्रमा देशकै परिचय बनेर उभिएकोछ यो अग्लो चुचुरो-सगरमाथा ।
तर यत्तिबेला शोकाकुल छ सगरमाथा । बर्खि बारेर बसेको छ खुम्बु क्षेत्र । हिउँका पहाडमाथि तप्केका मान्छेका आँशु ढिक्काहरु पग्लिएर दुधकोशीमा चिसो पानी बगेको छ । हो, त्यहि कालो झिसमिसे (अप्रिल १८) बिहानीमा १६ जना हाम्रै दाजुभाईले जीवनलिला समाप्त गरेसँगै सगरमाथा शोकाकुल छ । अध्याँरो छ । मौन छ । सगर छुने चुचुरोको माथ छोएर बहने बतास मन्द छ । अनि त बर्खि बारेर अलिनो भएको छ-खुम्बु क्षेत्र ।
सगरमाथा र शेर्पालाई अलग राखेर कोलम्बसले कोपरेको यो पातालभूमीमा मेरो देशको परिचय खोज्ने हो भने मैले कि त छिमेक चिनाउनु पर्छ । या त गुगल छिर्नुपर्छ । धेरै चोटी मैले यसै गरे । मेरो देश चिनाउन । छातीमा देश टाँसेर हिड्न मिल्ने भए टाँसेरै हिड्थे हुँला यो मार्टिन लुथरले कोरलेका सपनाहरुको शहरमा–नेपाल । नमिल्दो रहेछ त्यसरी सिङ्गै देश बोक्न पनि । कोहि अड्कलबाजी लाउँछन् र सोध्छन्- नेपाल, भारतको कुनै प्रान्त हो ? म फतक्कै गल्छु र भन्छु-होइन । र प्रतिप्रश्नमा विश्व भूगोल सम्बन्धी उसको गिदी छाम्छु-के तिमीलाई थाह छ, संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो कुन हो ?
यो जवाफमा म मेरो हिमालप्रति गर्व गर्छु ।
उन्नाइसौं शताब्दीमा फ्र्यांकलिन रुज्बेल्टले गाँडेको विकासका सूदुर संरचना उभिएको यो शहरमा म एउटा आप्राबासी अनुहारलाई मेरो हिमाल चिनेको पल दंग पर्छु । आत्मियता बाँड्दै उनीहरु मेरो आँखा, नाक, मुख सप्पै सप्पै इन्द्रियहरु पढि सकेर अगाडि बोल्छन्-आर यु शेर्पा ?
यद्धपि म शेर्पा त होइन तर गर्व गर्छु फेरी पनि ...।
ती इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र साहसी शेर्पाहरुले नेपाल र नेपालीको चिनारी संसारभर दिएकाछन् । अनेक किर्तीमानको होडमा तिनै शेर्पाका पदचाप पछ्याउँदै, तिनैका पाखुरा समाउँदै सगरमाथा उक्लिएकाहरुको अन्र्तहृदयमा त्यहि शेर्पा शब्द, जाति र कर्म सबैभन्दा प्रिय छ । तिनैका बुँई चढेर संसारको अग्लो भुमी टेक्दाको असिम आनन्द जीवनको अन्तिम श्वासप्रश्वाससम्म पनि कति आनन्दमय लाग्दो हो ? साँच्चै जिम्मेवारी र श्रममा कति इमान्दार छन् ती शेर्पाहरु ? आफ्नै जीवनलाई जोखिममा राखेर कर्तव्यपरायणदेखि कहिल्यै बिमुख नहुने तेञ्जिङ्ग नोर्गेका पाइला पछ्याउँदै शिखर उक्लने तिनलाई एकपल्ट सलाम छ । र, सलाम छ तिम्रो इमान्दारिता र साहसलाई । त्यसैले त गर्व लाग्छ नि, किराती कुलको मेरो जन्मकुण्डलीलाई कुनै गोरो अनुहारले ठाउँ-ठाउँमा -"आर यु शेर्पा ?" भनि रहदा पनि ।
यसो भन्दै गर्दा केहि साता अघि सगरमाथा आरोहणको क्रममा दिवंगत भएका १६ अनुहारहरु फेरी स्मृतिमा दोहोरिरहेछन् । ओभिएका छैनन् तिनका आफन्तजनका आँशुहरु । अहँ रोकिएका छैनन् तिनका परिवारले बगाएका अश्रुभेल । थामिएको छैन बिछोड र बियोगमा धरधरी रोएका मनहरु ।
यता राज्य पीडितका घाउहरुमा मल्हम होइन नुनचुक छर्किरहेछ । ४० हजार रुपैया सुँघाएर पीडित परिवारलाई जिस्काईरहेछ - लाछी सरकार । सरम छैन सरोकारवालाहरुलाई । मौन छन् ट्रेकिङ्ग एजेन्सीका मालिकहरु । यी सब “खैरे आयो र खैरे गयो” मै पर्यटनको प्रर्बद्धन ठान्छ र यसैलाई ठुलो बिकास र प्राप्ती मान्छ । तर तिनै खैरेलाई बाटो देखाईदिने पथप्रर्दशकहरु, जोखिम उठाएर अरुलाई मर्नबाट बचाउँने शेर्पाहरु, अझ भनुँ आफै मरेर अरुलाई जीवन दिने साहसी ति पासाङ्ग कर्मा, लाक्पा तेन्जिङ्ग र मिङ्मा नुरुका आत्माहरुले इन्कलाब गाईरहेछन् । फुर्वा , दोर्जी र आङछिरिङहरु भनिरहेछन् -हाम्रो जीवनको मुल्य कसरी कम भयो ? तेन्जिङ्ग छोतार, फुरु तेम्बा र आशबहादुरहरु सोधीरहेछन्–के मान्छेको जीवनको मुल्य उसको पेशा, कर्म र ताकत पिच्छे फरक हुन्छ ? दिवंगत थेन दोर्जी, छिरिङ ओङ्गेचु, निमा र प्रेम तेन्जिङ्गको आत्मा भएर सोध्नु मन छ-सरकार , के यी हिमपुरुषहरु तिम्रै नागरिक होइनन् र ? यदि हो भने किन यत्ति धेरै बिभेद ? मान्नुस-यो देश षडयन्त्र गन्हाउँने गिदीले मात्रै होइन, बलिया पाखुराहरुले पो चलेको छ ।
राज्य, मालिक र उपल्लो बर्गका ठालुहरुले श्रमजीबि मजदुरहरुको हितमा सधैं काम गर्दै जाऊन् । तिनले पाउँने तनाखा त्यत्ति सस्तो पनि नहोस कि मृत्यु पछि कात्रो किन्न समेत नपुगोस् ।
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा समान अवसर र समान अधिकारको पक्षपोषण गर्दै अप्रिल १८ मा दिवंगत भएका सम्पूर्ण पर्बतारोहीहरुमा भवपूर्ण श्रद्धासुमन अपर्ण गर्दै यसपाली पनि यत्ति ।
सगरमाथा आरोहणको क्रममा दिवंगत भएकाहरुप्रति शेर्पा किदुगले न्युयोर्कमा आयोजना गरेको श्रद्धान्जली कार्यक्रममा सहभागीहरु । तस्बिर : प्रदीप थापामगर
विहिवार, २०७१ बैशाख १८ गते २३:४४ / Thursday, May 01, 2014 11:44 pm